Aabaha Erling Braut Haaland Oo Ka Hadlay Wararka La Isla Dhexmarayo Ee Ku Saabsan Weeraryahanka Borussia Dortmund
HomeHoryaalka GermalkaAabaha Erling Braut Haaland oo ka hadlay wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan weeraryahanka Borussia Dortmund
November 22, 2020 Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland ayaan haatan ka fikiraynin inuu ka tago Signal Iduna Park, sida uu qabo aabaha reer Norwey ee Alf-Inge Haaland .
20 jirkaan ayaa qaab ciyaareed heer sare ah ku jira BVB tan iyo markii uu ka yimid Red Bull Salzburg bishii Janaayo, isagoo dhaliyay 27 gool 29 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan 11 gool 11 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Real Madrid iyo Manchester United ayaa la rumeysan yahay inay xiiseynayaan saxiixa xiddiga reer Norway mustaqbalka dhow.
Sikastaba, aabaha Haaland ayaa sheegay in weeraryahankan uu hada diirada saarayo sidii uu koobab ula qaadi lahaa kooxda Dortmund oo gurigooda guuldaro kala kulantay kooxda Bayern Munich kulankoodii ugu dambeeyay kahor kulamada caalamiga.
“Marka aad sifiican u ciyaareyso, waa macquul in kooxaha waa weyn ay garaacaan albaabkaaga, laakiin waxaan halkaan uga hadlaynaa mala-awaal,” ayuu u sheegay SPORT1.
“Waligaa ma ogaan doontid waxa dhici doona. Kama aanan hadlin talaabadaas oo kale, waxaan u maleynayaa inuu jeclaan lahaa inuu koobab la qaado Dortmund, taasi waa hadafkiisa. Erling weli wax badan ayuu ku gaari karaa Jarmalka horumar weynna wuu sameyn karaa. dibedda muhiimad nooma laha.
“Waxaan mararka qaar u maleynayaa inuu doonayo uuna isku adkeyn karo horyaal kasta. Waqtigaan la joogo, wuxuu ku faraxsan yahay Bundesliga wuxuuna diirada saarayaa Dortmund. Kaliya wuxuu doonayaa inuu noqdo ciyaaryahan fiican mana fiirinaayo wax aad u fog.”
Haaland waxay qandaraas kula jirtaa kooxda Lucien Favre ilaa xagaaga 2024.